I-Lightbringer Apartment-ziko lesixeko sasePazardzhik
Indlu eyonwabisayo enelanga enebalcony ebanzi kwindawo ephezulu, ijonga indawo yoluntu kunye nepaki yesikolo samabanga aphakamileyo edolophini ePazardzhik. Ukuhamba umgama ukusuka kwi-24/7 yokutya, iziselo kunye neevenkile ezithengisa ukutya, iikhemesti, iikhefi, iindawo zokutyela, iibhanki, ipaki enkulu yogcino-zilwanyana edolophini, indawo yentengiso kunye neendawo eziphambili.
Ifulethi elithambileyo elisanda kulungiswa elenziwe ngokwesitayile kunye nokusebenza engqondweni. Onawo uya kuba nekhitshi elincinci elinayo yonke into oyifunayo, ukuba uzimisele ukupheka ukutya kwakho. Izixhobo zokupheka, ifriji, iipleyiti, izinto zokuthambisa, njl.njl. Ikhitshi libonelela ngokungena kwibalcony. Kukho igumbi lokuhlala elinokufikelela kwi-balcony kunye nebhedi ephindwe kabini yesofa. Igumbi lokuhlala lifakwe iifestile ezintle zesiFrentshi ukwenza umbono kunye namava onke amnandi. Ukwasebenzisa igumbi lokulala elinebhedi ephindwe kabini, kunye nebhedi eyongezelelweyo yesofa. Ikwabonelela ngokufikelela kwi-balcony kwaye igxininisa kwii-accents zomthi. Igumbi lokuhlambela elitofotofo, nelisandula ukuyilwa liza kuba sendleni yakho.
Iibhedi kunye neetawuli zibandakanyiwe.
Ixesha elichithwe kakuhle siye sagqiba ekubeni singabikho kwizikrini zeTV, ngoko ungacwangcisa ngcono imisebenzi enentsingiselo.
IPazardzhik yindawo enomdla enembali eninzi. Yenye yezona ndawo zichume kakhulu eBulgaria. Zininzi iindawo ezincinci zokuthengisa iwayini, iindawo ezithengisa utywala ezijikelezileyo ezineziqhamo ezimnandi kunye nemifuno yamaxesha onyaka. Ukuba kufutshane nesixeko sakudala esidumileyo sasePlovdiv (iikhilomitha ezingama-30-40), iindawo zokuchithela iiholide ze-balneological zentaba, izikhululo zeenqwelomoya ezibini, kunye neendawo ezininzi zabakhenkethi, ziyenza ibe yindawo efanelekileyo yokuya kuyo.
Sinokunika uncedo ngezalathiso zedolophu nakwindawo ezingqongileyo. Sinomkhokeli wabakhenkethi kwintsapho, ngoko uncedo lwengcali luya kunikwa, ukuba luyimfuneko.
Le ndawo isembindini wedolophu. Iyanxibelelana kwaye ibonelela ngofikelelo olukhawulezayo kuyo nayiphi na indawo onokufuna ukuyindwendwela nokuba ziivenkile, iimyuziyam, iipaki okanye iindawo ezinexabiso lolawulo.
Singabonelela ngoncedo lomkhomba-ndlela wedolophu kunye nekufutshane nedolophu. Sinomkhokeli wabakhenkethi kwintsapho, ngoko uncedo lwengcali luya kunikwa, ukuba luyimfuneko.